Chii Chaunofanira Kuziva Nezve Kufuridzira Kushambadzira: Zvese Zvinyorwa | ECommerce nhau
Chii chaunofanira kuziva nezve kukurudzira kushambadzira
Kuva anokurudzira nhasi kurota kwechero wechidiki. Muchokwadi, ichokwadiwo kune chero munhu mukuru nekuti ivo vanozviona sebasa rakareruka, iro rinogona kuitwa kubva kumba uye risingasanganisi nesimba rakawanda (kana chokwadi chakasiyana). Sezvo vezvenhau vakava vane mufashoni, uyu mufananidzo akabuda uye anokurudzira kushambadzira akaitawo.
Asi, kusiyana nevamwe, uyu haanyatso kuzivikanwa. Naizvozvo, nhasi tiri kuzotaura newe nezve zvese izvo zvaunofanirwa kuziva nezve kukurudzira kushambadzira uye chii chinogona kukubatsira kuti umire pakati pevazhinji vari kuyedza kuve vamiriri vevamiriri mune chikamu chavakazvipira. Totanga here?
1 Chii chinonzi kushambadzira kushambadzira
2 Zvinhu zvekuziva nezve kukurudzira kushambadzira
2.1 Nezve vanokurudzira
2.2 Nezve ivo vanofurira 'nzira dzekutaurirana
2.3 Nezve kushambadzira zvigadzirwa uye makambani
Chii chinonzi kushambadzira kushambadzira
Kufuridzira kushambadzira ndechimwe chinhu chazvino. Iri zano rekushambadzira iro rinotarisana nekuwana kubatana kubva kumunhu ane pesvedzero (nekuti vanhu vazhinji vanomutevera, iye protagonist paInternet kana, nemamwe mazwi, iye anopesvedzera; uye kambani kana brand.
Uyu mukurumbira anozivikanwa nekuve nehunhu hunokwezva zviuru zvevateveri pasocial network. nenzira yekuti anova mumiriri muchikamu chake, uye zvese zvaanotaura kana kuita zvinoenderana ne "mafeni" aya anotomutevedzera. Nenzira iyi, chokwadi chekuti munhu iyeye anoshanda pamwe nechavo kana kambani chinogona kumutsa maitiro akanaka, semuenzaniso kuwedzera kushanyira webhusaiti, kuwedzera vateveri, kugadzirisa mukurumbira wechiratidzo kana kuwedzera kutengesa kwayo.
Chaizvoizvo, iyi zano rekushambadzira, kusiyana nemamwe, haisi "mutsara" sezvo zvinoenderana nemaitiro azvino uye shanduko. Naizvozvo zvinonzi zvinoshanduka zvachose uye zvinofanirwa kugadziriswa munguva pfupi kuti zvibudirire.
Zvinhu zvekuziva nezve kukurudzira kushambadzira
Uchifunga kuti hunyanzvi uhu hutsva uye kuti hunhu hwekukurudzira huri kuchinjawo (rimwe zuva iwe uri pamusoro uye unotevera vateveri vanogona kukusiya chero chikonzero), chokwadi ndechekuti kuronga zano hakusi nyore .
Uye zvakare, iwe unofanirwa kufunga nezve zvimwe zvinhu zvatino pindura pazasi.
Vanokanganisa vanhu vanofambisa "masasi", Kureva, zvavanotaura kana kuita chinhu icho avo vanovatevera vanotenda. Nechikonzero ichi, kubatana kwavanako nemakambani uye zvigadzirwa kazhinji nekuti vanogovana iwo tsika navo. Kunyangwe isu tisiri kuzokunyengera, kune vamwe vari "kutengeswa" kumakambani aya. Nekudaro, kana izvozvo zvikaitika, vateveri pachavo vanouya kuzo "kuranga" vanokurudzira.
Chinangwa chekupedzisira cheanokurudzira kuita mari. Naizvozvo, chero kubatana kwaunoita nekambani (ingangoita 100%) inobhadharwa. Kunyangwe makambani mazhinji uye mabhureki achisarudza kuti kubhadhara kuri neimwe nzira (nezvigadzirwa, zvakaderedzwa ... Asi izvo zvinoshanda chaizvo ndezvaunogamuchira mari sezvo, neimwe nzira, zvaunoita kubhadhara basa remunhu iyeye anokurudzira kuti agadzire zvemukati zvakanangana nekambani kana chiratidzo.
Chinhu chisina kunaka chevanokurudzira ndechekuti, kazhinji, haugone kusvika pakuziva kuti vangani vevateveri ava vari vechokwadi. Uye ndezvekuti kutengwa kwevateveri kuri nyore kwazvo zvekuti kunogona kuitwa mumaminitsi mashanu chete, kukwidza account yako kubva pa5 kusvika pa0, 2000, kana 20000 mune imwe nguva yemaawa. Asi izvi zvinoita kuti uve munhu anokurudzira here? Mukuona, hongu, asi kune zvimwe zvinhu zvekutarisa senge ivo vanofarira zvinyorwa, kuti pane zvirevo (zvinoenderana nezvakanyorwa kana vhidhiyo yakatumirwa), kuti vanotaura nezvake mune mamwe midhiya (mablog , nhau, social network ...).
Nezve ivo vanofurira 'nzira dzekutaurirana
Kune akawanda masocial network. Uye uzvitende kana kwete, vazhinji vakawanda vanozvarwa gore rega rega. Dambudziko nderekuti izvi hazviwanzo kushanda uye zvinopedzisira zvanyangarika nenzira imwechete yavakazvarwa: pasina munhu anoziva. Asi, yeavo vese, pane zvimwe izvo ivo vanokurudzira ivo pachavo vaanoona se "zvirinani." Mune ino kesi, isu tiri kutaura nezve vaviri kunyanya: Instagram uye TikTok.
Uye zvakadii neYouTube? Kana iwe wanga uchiteera vanokanganisa kwechinguva, iwe uchazoziva kuti ruzhinji rwevaya vakasimbiswa (kunyanya mitambo yemavhidhiyo) vakazvarwa paYouTube. Nekudaro, ikozvino haina kudaro "fashoni". Muchokwadi, izvi zvakatsiviwa neTwitch, ndimo mune vazhinji vava kuyedza kuzviitira zita pachavo uye pamusoro pegiyoni revateveri, uye kwete mumitambo yemavhidhiyo chete, asi chikamu chemimhanzi chiripowo munharaunda ino yemagariro.
Nekudaro, isu tinogona kutaura kuti makuru mapuratifomu evanokurudzira ndivo aya. Izvo zvakanakira ivo vanokurudzira ivo pachavo, kunyanya sezvo zviri nyore kubatana nevateveri, ndeye Instagram. Uye zvakare, iyo chokwadi chekuti kune akati wandei mashandiro anowanikwa kuti mushandirane nemabrands (mbiru pane iyo mbiri, Nhau, IGTV, mavhidhiyo ... inokutendera iwe kuti upe dzakasiyana sarudzo.
Nezve kushambadzira zvigadzirwa uye makambani
Pakupedzisira, isu tichaenda kukuudza nezvazvo kukurudzira kushambadzira kunoenderana nemhando uye makambani. Uye ndeyekuti makambani mazhinji uye akawanda arikutarisa vanokurudzira kuitira kuti vasvike kune vashandisi uye kuti kambani yavo kana chigadzirwa chinozivikanwa (uye kuti chinowana mukurumbira wakanaka). Neichi chikonzero, zvakajairika kuti makambani atange kushandisa chikamu chebhajeti ravo rekushambadzira pa "kuhaya" hunhu uhu.
Sei? Zvakanaka, nekuti rudzi irworwo rwekushambadzira, pamwe chete neSEO uye ma ads pamasocial network, iri kupa zvirinani uye zvirinani mhedzisiro. Izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kuisa parutivi dzimwe nzira uye kumwe kushambadzira (semuenzaniso, kuburikidza neemail), asi kuti iwe uite uko, izvozvi, zviri nyore kusvika kune vangangove vatengi nevatengi.
Ehezve, kwete chero chero vanokurudzira. Imwe yekutanga nzvimbo yekushambadzira kushambadzira kune imwe kambani inyaya yekuti inofanirwa kusarudza vanhu vanoenderana neayo chikamu. Mune mamwe mazwi, ivo vane hukama. Semuenzaniso, kana iwe uine kambani yemitambo yemavhidhiyo, iwe uchasarudza mavhidhiyo evanokurudzira mutambo, hauzoendi kune vamiriri vekunaka, nekuti chako chinangwa (kana chinangwa chevateereri) chisipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chaunofanira kuziva nezve kukurudzira kushambadzira
Maitiro ekuburitsa zvinyorwa zvinozvimisikidza pachako paLinkedin
Ecommerce nyanzvi: chii icho, chakakosha kana chakakurudzirwa zvidzidzo, mashandiro ...